500La soco Saacadaha
1000La soco Saacadaha
2000La soco Saacadaha
3000La soco Saacadaha
Waa maxay faa'iidooyinka iibsashada saacadaha Daawashada YouTube?
Waxay kaa Caawineysaa Inaad Gaadho 4,000 Saacadood Si Aad U Bilaashid Kanaalkaaga
Daawo Saacadaha Caawinta Kordhinta Qiimeynta YouTube & Google
Adeegga STARTS ee 24-72 Saacadood & Wuxuu Sii Wadaa Maalin kasta Ilaa Dhammeystirka
Gaarsiinta Degdega ah & Dammaanad Qaadka
Wuu Shaqeeyaa Si Fiican Hadaad Dhiibto Video + 15 Daqiiqo ah
Siyaabaha degdega ah ee kor loogu qaado saacadaha daawashada YouTube
Marka loo eego warbixinta Statista, in ka badan 500 saacadood oo fiidiyow ah ayaa la soo geliya YouTube-ka daqiiqad kasta. Iyada oo ay ka kooban tahay waxyaabo badan, habka lagu talinayo natiijooyinka raadinta ee khuseeya ayaa noqda mid adag. Ilaa sannado ka dib, YouTube waxay ku tiirsanaan jirtay tirada aragtiyaha fiidyaha si ay ugu habboonaato natiijooyinka raadinta iyo fiidyaha lagu taliyay. Shuruudaha garsoorka YouTube waa isbedelay, hadda, YouTube waxay ku xisaabtamaysaa cabbirro badan si loo dalbado natiijooyinka raadinta.
Halbeegga 'Watch Time' waxaa loo arkaa inuu yahay qodobka koowaad ee lagu go'aaminayo darajada YouTube. YouTube waxa ay eegtaa inta wakhtiga ay dadku ku qaataan daawashada fiidyaha iyo in ay la falgaleen fiidyahaaga iyo in kale. Kaliya maaha aragti, ee waxay ku saabsan tahay inta dadku ay ku dheggan yihiin fiidiyowyadaada. Iyadoo kordhinta aragtidaadu ay fududahay, waxay caddayn kartaa inay adag tahay inaad kordhiso wakhtiga daawashada si dabiici ah. Tani waa halka ay YTpals kaa caawin karaan. Waad awoodaa iibso saacadaha daawashada YouTube laga bilaabo YTpals si loo kordhiyo fiidiyowyadaada 'Youtube' iyo Google ee qiimeynta raadinta.
Hage Dhamaystiran oo lagu Daawado Waqtiga
Watch Time waa halbeeg go'aaminaya inta ay le'eg tahay qoraalkaagu daawadayaasha ku mashquulinayaan. Si aad u kordhiso wakhtiga daawashada waxaad u baahan doontaa inaad ka dhigto fiidyahaaga si ay u ogaan karaan daawadayaasha Kahor inta aynaan u bixin hababka kordhinta wakhtiga daawashada, aan si kooban u eegno taariikhda darajada YouTube ee algorithm.
Ilaa 2012, cabbirka koowaad ee guusha fiidyaha waxaa loo tixgaliyay inay tahay tirinta aragtida. Qiimaynta fiidiyowyada waxaa lagu go'aamiyay tirada aragtiyada la ururiyay. Tani waxay horseedaysaa isticmaalka korodhka isticmaalka baits-ga, oo leh cinwaanno muuqaal ah iyo sawir-gacmeedyo kuwaas oo inta badan ka walaacsanaa helitaanka dhagsiinnada. In kasta oo fiidiyowyadan sed-ku-jiidka ah ay heli doonaan tiro badan oo aragtiyo ah, heerka haynta dhegaystayaashu aad ayuu u hooseeyaa. Heerka sare u kaca ayaa tilmaamay in isticmaalayaashu aysan ku qanacsanayn soo jeedinta. Natiijo ahaan, waxaa la ogaaday in tirinta aragtidu aysan ahayn tilmaanta ugu wanaagsan ee tayada ama ku habboonaanta fiidyowga.
YouTube waxay xaqiiqsatay in cabirka ugu wanagsan ee muuqaalku yahay inta uu isticmaaluhu ku qaato fiidyaha. Marka daawade daawado fiidyowga ilaa dhamaadka, waxay tusinaysaa heer sare oo ku qanacsan. Maadaama inta badan dakhliga YouTube lagu sameeyay xayaysiisyo, waxay macno samaynaysaa inay rabto daawadayaasha inay daawadaan fiidyaha ilaa inta suurtogalka ah. Xayeysiyeyaashu waxay YouTube u aqoonsadaan agabka tayada leh iyo xaqiiqda ah inay tahay goob maalinle ah oo daawashada fiidyaha ee daawadayaasha.
Waa Oktoobar 2012 markii la bilaabay algorithm-ka cusub ee YouTube. Algorithm-kan cusub, oo ku salaysan 'Watch Time' waxa uu xisaabta ku darsaday fiidyowga ilaalinaya daawadayaasha. YouTube waxa ay bilaawday in ay hagaajiso qiimaynta fiidyaha waxana ay abaal marisay kuwa caddeeyey in ay ka qayb qaadanayaan oo daawadayaasha ku hayeen YouTube wakhtiga ugu dheer Algorithm-ka cusub, tirinta aragtida looma tixgalinayn inay tahay go'aamiyaha qiimaynta waxa ku jira.
Waa maxay wakhtiga daawashada?
Watch Time waxay ka mid tahay cabbirrada badan ee YouTube u isticmaalo ujeedada SEO. YouTube waxa ay ku sifaysaa wakhtiga la daawashada in ay tahay wadarta wakhtiga ay daawadayaashaadu ku qaataan daawashada fiidyaha Buug-abuuraha YouTube-ka ee Playbook-ga waxa kale oo uu sheegayaa in fiidyowyada kordhiya wakhtiga daawashada goobta in la habeeyay si ay uga muuqdaan kuwo ka sarreeya natiijooyinka raadinta iyo fiidyaha la soo jeediyay. Ma jirto hal xeelad oo loo isticmaali karo in lagu kordhiyo qiimaha kanaalkaaga iyo fiidiyowyada indhaha daawadayaasha. Waxay u baahan tahay hab dhinacyo badan leh. Waxaad xitaa saacadaha daawashada YouTube ka iibsan kartaa YTpals. Kahor intaanan taa gaarin, waxaa jira waxyaabo ku saabsan wakhtiga daawashada YouTube oo ay tahay inaad barato naftaada.
Marka hore, heerka haynta daawadayaasha iyo qiyaasta daqiiqadaha la daawaday waa laba arrimood oo xidhiidh dhow la leh. Inta ay daawadayaashu ku qaataan macluumaadkaaga waxa lagu cabbiraa daqiiqado ama ilbiriqsi. Qiyaasta haynta dhegaystaha waxa loola jeedaa celceliska wakhtiga uu daawadahu ku qaato waxa ku jira. Heerarka haynta sare waxay tilmaan u tahay awoodda fiidyowga uu ku hayo dareenka isticmaalaha. YouTube waxa ay ilaalisaa habka uu fiidyahaagu wax ugu biiriyo wakhtiga la daawashada isticmaalaha goobta.
Marka labaad, YouTube waxay door bidaa daawashada wakhtiga kalfadhi kasta isticmaale. Watch Time kuma khusayso oo kaliya tirada fiidyahaaga ee la daawado laakiin ka qayb qaadashada fiidyahaaga wakhtiga daawashada isticmaale gaar ah YouTube ka. Wakhtiga fadhiga gaarka ah ee daawade ayaa aad muhiim ugu ah YouTube, maadaama hadafkooda ugu wayn uu yahay inay daawadayaasha ku qancaan oo ay ku mashquulaan goobta muddo dheer.
Ma heli doontid abaalmarinta wakhtiga daawashada haddii aad ku kordhiso muqaal 30-ilbiriqsi ah 20-daqiiqo. Furaha ayaa ah in la sameeyo fiidiyowyo soo jiidasho leh oo ka dhigaya daawadayaasha inay ku dhegganaadaan muddo dheer. YouTube waxa ay eegaysaa waxa ku jira oo kordhiya wakhtiga daawashada isticmaalayaasha goobta.
Tusaalaha Fahamka Waqtiga Daawashada YouTube
Isticmaaluhu wuxuu si gaar ah wax uga raadiyaa YouTube wuxuuna marka hore daawadaa fiidyahaaga. Intaa ka dib, isticmaaluhu wuxuu daawadaa fiidiyowyo taxane ah oo xiriir la leh. Xaaladdan oo kale, wakhtiga daawashada waxa ku jiri doona wakhtiga daawashada fadhiga ee lagu qaatay fiidyowgaas taxanaha ah. Waqtiga daawashada si xun ayey u saameyn doontaa haddii daawadayaasha ay ka tagaan muuqaalka oo ay u gudbaan si ay u sameeyaan baaritaan kale. Wakhtiga daawashada si togan ayay u saamayn doontaa haddii fadhi cusub oo daawashada YouTube ay abuurto waxa aad ka kooban tahay. Tusaale ahaan, saamaynta YouTuber-ka la aasaasay ayaa dhaqaajin doonta fadhiyada daawashada marka isticmaalayaashu ay sii wadaan daawashada fiidiyowyada kale ee YouTuber-ka ah.
Muhiimada Wakhtiga Daawashada YouTube
Hadda oo aan ognahay wakhtiga daawashada, aan eegno muhiimada wakhtiga daawashada u leeyahay abuuraha nuxurka -
Mawduuc tayo sare leh: Marka daawadayaasha ay dib ugu noqdaan fiidiyowyadaada ilaa dhamaadka, waxay tilmaan u tahay xaqiiqda in waxa ku jira YouTube uu yahay mid tayo sare leh. YouTube ayaa ugu dambeyntii doorbidi doona fiidyahaaga oo kordhin doona darajooyinkooda iyagoo u xayeysiin doona sida fiidiyowyada la soo jeediyay.
lacagaynta: Si aad lacag uga samayso YouTube adigoo iska kaashanaya AdSense, waa muhiim in cabbiraadaha wakhtiga daawashadaada ay noqdaan kuwo cajiib ah. Marka loo eego siyaasadda cusub ee YouTube, waxa ku jira waxa uu u baahan doonaa ugu yaraan 4,000 oo saacadood oo daawasho ah sannadkii YouTube haddii aad rabto inaad ka hesho faa'iidooyinka lacagta.
Ku qanacsanaanta isticmaalaha: Haddii wakhtiga daawashada kanaalkaaga YouTube uu sii kordhayo markaas waxay la macno tahay in daawadayaashaadu ay ku faraxsan yihiin waxyaabahaaga. Waxay tilmaan u tahay xaqiiqda inaad awood u leedahay inaad soo jiidato daawadayaasha ku hawlan.
Sida Loo Ogaado Saacadaha La Daawado Kanaalka
Kahor intaadan ogaanin siyaabo aad ku kordhin karto waqtigaaga daawashada, waxaa muhiim ah inaad eegto tirakoobka kanaalkaaga. Taas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad ka furto Istuudiyaha Abuuraha YouTube oo aad ka furto tabka falanqaynta ee liiska gacanta bidix. Bogga falanqaynta, dooro " 365-kii maalmood ee u dambeeyay ee aragtida ee xagga hoose ee jaantuska. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto wadarta daqiiqadaha ay dadku ku bixiyeen daawashada macluumaadkaaga. Haddii tirooyinkaagu ay muujiyaan 240,000 ama 4,000 saacadood, markaa waxaad si guul leh uga gudubtay heerkii lacag ururinta oo waxaad ku socotaa wadadii saxda ahayd.
Isticmaalka Falanqaynta si loo fahmo Haynta Dhagaystaha
Dhagaystayaashaada waxa la filayaa in ay si joogto ah hoos ugu dhacaan wakhti ka dib, laakiin waxa jira qodobo gaar ah oo ku jira fiidyaha oo haynta dhagaystayaashaadu ay u qaadan karto hoos u dhac weyn. Waa muhiim in la falanqeeyo cabbirka haynta dhegaystaha si loo fahmo sababaha ka dambeeya hoos u dhaca ku haynta dhegaystaha ee kanaalkaaga. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan sii-haynta dhegaystaha ee tabka falanqaynta ee ka hooseeya qaybta dulmarka. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka hesho meelaha ugu sarreeya iyo dooxooyinka heerka haynta daawadayaasha, kuwaas oo lala xidhiidhin karo qodobbo gaar ah oo ku jira fiidiyowga. Waxaa jira siyaabo gaar ah oo aad ku xidhi karto dareenka dhagaystayaashaada 15 ka daqiiqo ee ugu horeeya fiidyahaaga.
Aynu eegno qaar ka mid ah.
Si degdeg ah u gaadh barta: Haddii fiidyowgaaga uu sharraxayo maaddo adag ama uu bixiyo casharro wax ku saabsan, dhegaystayaashu waxay rabaan inay isla markaaba u helaan nuxurka. Waxaa laga yaabaa inaad ku dhamaato inaad damiso daawadayaasha haddii aadan si dhakhso ah u helin nuxurka ugu muhiimsan.
Ka saar Muusiga Hordhaca: Haddii hordhaca fiidyahaagu uu si gaar ah u dheer yahay, daawadeyaasha waxa laga yaabaa inay ku dhameeyaan inay ka tagaan kanaalkaaga. Waxa intaa dheer, abuurayaasha nuxurka qaarkood waxay ku qaataan wakhti fiican oo ay ka codsadaan daawadayaasha inay "rijiyaan astaanta gambaleelka". Waxa habboonaan lahayd in hordhaca la gaabiyo oo aad aragti yar ka bixiso waxyaabaha uu fiidyowgaagu ka hadli doono.
Ha isticmaalin sed gujisyada: Waa muhiim in la isticmaalo cinwaano muuqaal ah oo sax ah iyo thumbnails kuwaas oo aan marin habaabin daawadayaasha. Haddi aad samayso wax ku saabsan riixbait, daawadayaasha way xanaaqi doonaan waxaana laga yaabaa inaysan mar danbe ku soo laaban kanaalkaaga. Habka kale ee aad u kicin karto xiisaha daawadayaashaada waa adiga oo tusinaya teaser ka mid ah gabagabada sheekada fiidiyowga.
Sida loo kordhiyo wakhtiga daawashada kanaalkaaga YouTube
Haddii daawadayaashu ay waqti badan ku bixinayaan fiidiyowyadaada, markaa algorithm-ka YouTube ayaa muujin doona kanaalkaaga iyo fiidyowyada talooyinka raadinta. YouTube ayaa sidoo kale hore u sharaxay inay diirada saari doonto muuqaalada kordhinaya wakhtiga fadhiga daawadayaasha YouTube. Waxay ku xisaabtamaysaa ma aha oo kaliya fiidyaha soo socda ee uu qofku daawado ka dib daawashada fiidyahaaga, laakiin fiidyowga xidhiidhsan ee wakhtiga daawashada ka dib. Ma jirto hal xeelad oo la adeegsan karo si loo kordhiyo wakhtiga daawashada kanaalkaaga. Mid ka mid ah siyaabaha waa inaad iibsato saacadaha saacadaha YouTube. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa talooyinka soo socda iyada oo la socota iibsashada saacadaha saacadaha, si aad u kordhiso wakhtiga daawashada kanaalkaaga iyo sidoo kale wakhtiga daawashada fadhiga daawadayaasha.
1. Ka dhig hordhaca fiidyahaaga mid xoog badan oo soo jiidasho leh
Waa muhiim in la xidho dhagaystayaasha bilowgaba. Inta badan waxaa la sheegaa in 15-ka ilbiriqsi ee ugu horreeya muuqaalku ay muhiim u yihiin soo jiidashada dareenka daawadayaasha. Buug-baraha YouTube-ka waxa ka muuqda talooyinka qaar ee samaynta hor-u-socod koronto, kaas oo ka kooban -
Qaabka ugu horreeya ee adag: Qaabka ugu horreeya ee muuqaalku waa inuu noqdaa mid soo jiidasho leh, iyada oo la adeegsanayo shakhsiyadda iyo fariimaha ama muuqaal ahaan.
La qaybso daawadayaasha: Waa inaad isku daydaa inaad si toos ah ula hadasho daawadayaasha, oo aad si gaar ah ugu tixraacdo halkii aad ka ahaan lahayd daawadayaal.
Damacooda kici: Waxaad ka dhigi kartaa daawadayaasha in ay ogaadaan adiga oo samaynaya wax ama iyaga oo weydiiya su'aal.
Muuqaal horudhac ah: Waxaad soo bandhigi kartaa muuqaal yar oo muuqaal ah oo ka yar 15 ilbiriqsi. Sidan ayay dhegaystayaashu u garanayaan waxa laga filayo.
Dhegaystayaashaadu waxay u badan tahay inay ku dhegganaadaan oo ay daawadaan waxa ku jira marka aad isticmaasho qaybaha hodanka ku ah fiidyowga marka hore.
2. Ha isticmaalin gujinta
Waa xaqiiqo la wada ogsoon yahay in sed-ku-jiidku aanay shaqaynayn haddii aad doonayso inaad kordhiso wakhtiga daawashada fiidiyowyadaada. Inta badan, waxay yeelan doonaan saameyn lid ku ah sida daawadayaasha ayaa raadin doona macluumaad kale haddii aadan fulin ballanta. Marka aad bixiso thumbnail iyo cinwaanka fiidyaha, waa in aad isku daydaa in aad dhagaystayaasha siiso qaar ka mid ah waxa ay ka filayaan fiidyaha. Bilaabida muuqaal leh sumad qurxoon ama hordhac ayaa laga yaabaa inay u ekaato mid wanaagsan, laakiin furaha ayaa ah inaad si dhakhso ah u gaadho meesha.
3. Isticmaal muuqaalada cutubyada fiidiyowyada
YouTube waxay leedahay muuqaal aad u wanaagsan oo kuu ogolaanaya inaad samaysato cutubyo. Cutubyadu maaha kaliya inay ku fiican yihiin inay u kala qaybiyaan fiidyowga dheer qaybo, laakiin waxay sidoo kale u ogolaataa daawadayaasha inay arkaan waxa ku xiga fiidiyaha. Markaad rabto inaad ku darto muujinta cutubyada fiidyahaaga, waa muhiim inaad go'aansato qaybaha fiidiyowga. Qayb kasta ama cutub kastaa waa inay lahaadaan hordhac wanaagsan iyo sheeko xiiso leh. Abuuritaanka dulmar qalafsan cutubka ka hor ayaa aad faa'iido u leh kiiskan. Talaabo dheeri ah oo aad qaadi karto waa ku darista cutubyada iyadoo lagu salaynayo jaantusyada waqtiyada. Habkan daawadayaasha ayaa sidoo kale u bedeli kara calaamado waqtiyo kala duwan si ay u daawadaan qayb ka mid ah fiidyowga dheer.
4. Isku-darka joojinta qaabka
Fiidiyowyadaadu waxay u baahan yihiin inay ka qaybgaliyaan daawadayaasha haddii aad rabto inaad kordhiso wakhtiga daawashada. Isticmaalka hababka kala goynta waxay noqon kartaa xeelad aad u faa'iido badan samaynta fiidiyowyada ka dhigaya daawadayaasha inay ku hawlan yihiin. Dadku badanaa way caajisaan marka noocyada muuqaalka iyo sheekooyinka la midka ah ay ku soo noqnoqdaan fiidiyowga. Farsamooyinka joojinta qaabka sida beddelka xagasha kamarada, sawirada shaashadda iyo B-roll waxay qaban karaan dareenka daawadayaasha. Naqshadeynta qaabka asal ahaan waa farsamo beddeleysa dabeecad gaar ah, feker, ama xaalad. Farsamadan waxaa taageeray cilmu-nafsiga hab-dhaqanka iyo barnaamijka neuro-linguistic. Marka aad ku darto canaasirta kala goynta hannaankii, waxa ay abuurtaa muuqaalo iyo sheekoyin is beddela si joogto ah oo daawadayaasha ku haya.
5. Falanqaynta tartanka iyo cilmi-baarista ereyada muhiimka ah
Qiimaha ereyada muhiimka ah ee ku jira nuxurka muuqaalka lama iska indho tiri karo, waana sababta ay muhiim u tahay in la baaro ereyada muhiimka ah ee YouTube-ka marka la daabacayo fiidiyowyadaada. Waxaad baari kartaa ereyada muhiimka ah adiga oo isticmaalaya qalab ereyga muhiimka ah. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad ku qortaa mawduuc la xidhiidha nuxurka oo go'aamiso xiisaha raadinta dhagaystayaasha iyadoo ku xidhan mugga ereyga muhiimka ah. Waxaad samayn kartaa cilmi-baadhis kelmedda muhiimka ah adiga oo isticmaalaya talooyinka dhammaystiran ee YouTube-ka.
Falanqaynta tartanka waa in sidoo kale la sameeyaa waqti ka waqti si loo ogaado nooca nuxurka kanaalada tartamayaasha ay abuurayaan. Falanqaynta tartanku aad bay faa'iido u leedahay in la ogaado calaamadaha fiidyowga, ereyada muhiimka ah, iyo sidoo kale faallooyinka. Macluumaadka laga soo saaray falanqaynta tartanka waxaa loo isticmaali karaa in lagu horumariyo fahamka dadka la beegsanayo. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in la helo daldaloolada nuxurka kuwaas oo aad ku buuxin karto waxa ku jira fiidyowgaaga.
6. U isticmaal sheeko-sheekaynta fiidiyowyadaada
Habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo daawadayaasha inay ku hawlan yihiin fiidiyowyadaada waa adiga oo abuuraya muuqaalo qaab sheeko ah. Isticmaalka sheeko-sheekeysiga waxay fikrad fiican u noqon kartaa daawadayaasha raba in lagu maaweeliyo inta ay wax baranayaan. Waxaad ka fikiri kartaa siyaabo cusub oo gaar ah oo aad ugu gudbin karto nuxurkaaga qaab sheeko. Tani waxay ilaalin doontaa daawadayaasha xiisaha waxayna sii wadi doonaan daawashada fiidiyowyadaada, kordhinta wakhtiga daawashada ee habka. Marka aad samaynayso muuqaal, xasuusnoow in aad samayso wax ku maaweeliya oo ku baraya isku mar. Waxaa muhiim ah in laga fikiro sheekada qaab sheeko iyo qaab soo bandhigid kamarad, iyada oo aan loo eegin inta uu muuqaalku yahay.
7. La shaqee abuurayaasha kale ee ka kooban
Habka ugu wanagsan ee lagu kordhin karo wakhtiga daawashada YouTube waa adiga oo la shuraakoobay dadka isku fikirka ah ee fahmay ujeedada astaantaada. Markaad la kaashato abuurayaasha kale ee nuxurka leh, waxaad soo jiidan kartaa daawadayaasha cusub oo aad ballaarin kartaa saldhigga dhagaystayaasha. Tani waxay iyaduna gacan ka geysataa wakhtiga daawashada, waxayna sidoo kale kaa caawinaysaa kordhinta wakhtiga daawashada ee daawadayaasha marka ay gujiyaan waxyaabaha la midka ah kanaalka wada shaqayntaada. Wadashaqeyntan waa in loola dhaqmaa sidii shuraako ee yaan loo dhaqmin sidii suuqgeyn saameyn ku leh. In kasta oo suuq-geynta saameeyay ay dhammaan ku saabsan tahay helitaanka dhagaystayaal cusub oo adeeg ah, wadashaqayntu aad bay sax u tahay waxayna ku salaysan tahay qiyamka la wadaago.
8. Muuqaalo dhaadheer
Wakhtiga daawashada fiidyaha waxa kale oo saameeya dhererka Iyadoo fiidyow dheer uu awood u yeelan karo inuu helo wakhti la taaban karo oo daawasho leh oo kaliya dhawr daawadayaal, fiidiyaha gaaban wuxuu u baahan doonaa tiro badan oo daawadayaal ah si ay u helaan waqti isku mid ah. Fiidiyowyada dhaadheer ayaa u fiican kordhinta wakhtiga daawashada, si kastaba ha ahaatee, furaha ayaa ah inay ka qayb qaataan daawadayaasha. Fiidiyowyadan dhaadheer waa in la abuuraa iyadoo maskaxda lagu hayo dadka la beegsanayo. Waxa ay faa'iido u yeelan doontaa in la kordhiyo qayb ka mid ah waxyaabahaaga muuqaalka gaaban ee jira. Waxaad ka fikiri kartaa habab gaar ah oo aad ku ballaarin karto nuxurka. Marka guusha kala duwanaanshaha dheer la gaaro, waxaad tirtiri kartaa isla nuxurka jira ee qaabka fiidiyowyada gaaban.
9. Samee taxane muuqaal ah
Hab kale oo weyn oo aad ku kordhin karto wakhtiga daawashadaada waa adiga oo abuuraya taxane muuqaal ah. Wakhtiga daawashada ee ay ururiyeen fiidiyowyo taxane ah waxay u badan tahay inuu ka sii weynaado. Tani waa sababta oo ah daawadayaasha ayaa sii wadi doona daawashada fiidiyowyada la xiriira. Taxanahan ayaa diiradda saari kara mawduuc gaar ah ama caqabad. Waxay xitaa noqon kartaa qaab sheeko. Haddii taxanaha fiidyowgu uu soo jiito, daawadayaasha ayaa ku soo laaban doona macluumaadkaaga, taas oo kordhin doonta saacadaha la daawado wakhti ka dib. Markaad dooranayso dulucda taxanaha fiidyowga, waxaa lagu talinayaa in la doorto fiidiyowyada leh aragtida ugu badan. Waxaad u isticmaali kartaa fiidiyowyadan saldhig si aad u abuurto waxyaabo cusub.
10. Adeegso Falanqaynta YouTube si aad u fahanto aragtiyaha yaryar iyo makro
Waxaad fikrado fiican oo ku saabsan kanaalkaaga ka heli kartaa qaybta falanqaynta YouTube. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad cusub oo ku saabsan makro iyo aragtiyaha yaryar ee kanaalkaaga. Falanqaynta YouTube waxay kuu ogolaanaysaa inaad u kuur gasho daawashada maalmaha iyo wakhtiyada. Taas ka sokow, waxaa sidoo kale jira ikhtiyaarka ah in la eego xogta ku saabsan videos laftooda. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid qaybta falanqaynta si aad u go'aamiso celceliska wakhtiyada ka-joojinta isticmaalayaasha. Tani waxay kaa caawin doontaa horumarinta fahamka siyaabaha aad u kordhin karto ka qaybgalka dhagaystayaasha ee fiidiyowyadaada mustaqbalka. Sida kaliya ee aad uga dhigi karto nuxurka mid soo jiidasho leh daawadayaasha waa adoo fahmaya baahiyahooda, taas oo ah waxa falanqaynta YouTube ay bixiso. Waxaad u isticmaali kartaa macluumaadka si aad ugu habayso macluumaadkaaga iyadoo loo eegayo baahiyaha dhagaystayaasha.
11. Go'aaminta wakhtiga saxda ah ee wax lagu dhejiyo
Fiidiyowyadaadu waxay u baahan yihiin in la ogaado haddii aad rabto inaad kordhiso wakhtiga daawashada kanaalkaaga. Taas awgeed, fiidiyowyadu waa inay ka muuqdaan talooyinka raadinta wakhtiga saxda ah. Marka loo eego cilmi-baarista khadka tooska ah, waqtiga ugu habboon ee wax lagu dhejin karo YouTube waa duhurnimada badhtamaha. Tani waa sababta oo ah saacadaha ugu badan ee daawashada waxaa loo arkaa inay yihiin 8pm. Si loo hubiyo in fiidyahaagu soo baxo saacadaha ugu sarreeya ee daawashada, waa inaad u tagtaa wakhti ku filan si ay u helaan tusmaynta. Soo jeedintan waxay si fiican u shaqeysaa inta lagu jiro maalmaha shaqada, si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad soo geliso fiidiyowyada maalmaha fasaxa ah, xeelad ka duwan ayaa loo baahan yahay in lagu dabaqo. Maalmaha fasaxa ah, waxa fiicnaan lahayd in fiidiyowyada la soo dhejiyo wax yar ka hor maaddaama taraafikada intarneedka uu guud ahaan sarreeyo maalmaha fasaxa ah.
12. Isticmaal liiska ciyaaraha YouTube
Si loo kordhiyo wakhtiga daawashada, daawadeyaashu qasab uma baahna inuu daawado fiidyahaaga. Waqtiga daawashada wuu kordhi karaa haddii isticmaaluhu uu daawado liiska heesaha oo ay ku jiraan fiidiyowyada dadka kale sidoo kale. Abuurista liiska heesaha ayaa faa'iido kuu leh, maadaama ay ku hagayso daawadayaasha suurtagalka ah khibrad daawasho toos ah. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad saameyn ku yeelato wadarta wakhtiga daawashada isticmaalayaasha. Samaynta liisaska-ciyaaraha, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad u habayso fiidyahaaga si taxane ah oo macno leh, oo leh dhacdooyin khuseeya, mawduucyo, bandhigyo, iyo taxane dhammaan naadiyada loo galiyay mid. Liisaska-ciyaartu sidoo kale waxay kordhiyaan suurtogalnimada fiidiyowyadaadu inay ka soo muuqdaan natiijooyinka fiidyaha la soo jeediyay.
Markaad isticmaalayso astaanta Playlists-ka, waxa ay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in aad kor ugu qaaddo khibradda daawashada wanaagsan. Waxaad isticmaali kartaa sifada Bilawga iyo Dhamaadka wakhtiyada si markaa 'gud' iyo 'bax' ee dhibcaha fiidiyooga loo cayimo. Waxaad gooyn kartaa horudhaca iyo ka-baxyada fiidyaha ee ku jira liiskaaga ciyaarta si aad u abuurto waayo-aragnimo aan sal lahayn. Sidoo kale, xasuuso inaad ku muujiso liiska-ciyaartoyda ku dhex-jira ciyaartoyda iyo waliba bogga kanaalka YouTube-ka. Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa boggaga liiska-ciyaareedka adiga oo sharraxaya.
13. Isticmaal Slates iyo Kaararka Dhamaadka
Waxa jira farsamooyin aad ku shaqayn karto si ay dadku u sii wadaan daawashada fiidyahaaga halkii aad si degdeg ah u dhageysan lahaayeen. Mid ka mid ah tabaha ayaa ah isticmaalka qaabka Kaararka ee YouTube, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ku daraan isku xirka shaashadda fiidiyowga. Xidhiidhiyayaashan fiidyaha ah ee qaabka kaadhadhku waxay ku xidhaan fiidyoow kale, liis-ciyaar, ama kanaal. Markaad isticmaalayso astaanta kaadhadhka YouTube, waxa ay ahaan lahayd fikrad wanaagsan in la dhigo kaadhka halka ay daawadayaashu inta badan ku dhacaan. Tani waxay u ogolaanaysaa daawadaha inuu daawado muuqaal la xidhiidha halkii uu dhamayn lahaa wakhtigooda daawashada. Isticmaalka Dhamaadka Slates waa ikhtiyaar kale oo weyn oo loogu hago daawadayaasha muuqaal kale oo la xiriira.
14. Isku darka Teasers
Inta badan, daawadayaashaadu waxay soo degi karaan dhowr ilbiriqsi ka dib, gaar ahaan haddii uu yahay muuqaal dheer. Waxaa jira siyaabo aad ku hubin karto in daawadayaashaadu ay ku sii dheggan yihiin muddo dheer. Waxaad ka fiirsan kartaa inaad ku darto teaser-ka bilawga fiidyahaaga, kaas oo soo koobaya nuxurka fiidyahaaga. Teesers-yadani waxay siin doonaan daawadayaasha fikrad ku saabsan waxa ay ka filan karaan fiidiyowga.
Haddii si sax ah loo isticmaalo, YouTube waxay noqon kartaa goob wanaagsan oo lagu horumariyo xidhiidhka shucuureed ee daawadayaasha mustaqbalka. Markaad isticmaasho xeeladahan kordhinta wakhtiga daawashada, kaliya ma heli doontid macaamiil badan iyo aragtiyo, laakiin waxay sidoo kale saamayn doontaa xidhiidhka ay daawadayaashaadu la leeyihiin astaantaada. Sidoo kale waad awoodaa iibso saacadaha daawashada YouTube YTpals oo isticmaal xeeladahan si wadajir ah, si aad u kordhiso wakhtiga daawashadaada si weyn. Adeegga saacadaha saacadaha ee YTpals ee iibso YouTube, waxaad awoodi doontaa inaad gaadho 4,000 saacadood oo wakhtiga daawashada YouTube-ka, taas oo ku siin doonta fursad aad lacag ka galiso kanaalkaaga. Adeeggu wuxuu bilaabmi doonaa 24-72 saacadood gudahood ka dib markaad dalbato.
YTpals ayaa bixisa adeegyo qaali ah oo kala duwan si kanaalkaaga YouTube looga dhigo mid guul leh. Si aad wax badan u ogaato, nala soo xiriir maanta!
Saacadaha YouTube Daawashada ayaa lagu daray gaadhigaaga.